သည်အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံးအချိန်ပါပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » သည်အချိန်ဟာ အကောင်းဆုံးနှင့် အဆိုးဆုံးအချိန်ပါပဲ
Posted by manawphyulay on Sep 17, 2012 in Community & Society, Creative Writing, Society & Lifestyle | 14 comments
” အရင်ဆုံး ပြုပြင်ရမှာကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလို့ မြင်မိပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်ချို့ယွင်း ပျက်ဆီးမှုတွေ၊ လူတစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဖော်ရွေမှု မရှိတာတွေ၊ နောက်သည်းခံနိုင်မှု မရှိတာတွေ ”
ဒီလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုရင် လူသားအားလုံး (အပေါ်အောက်အလွှာစုံ)အကုန်လုံး စိတ်ထားလေး
ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလို မလုပ်နဲ့ အထပ်ဖါးအောက်ဖိတွေကို ရှောင်ပြီး
ထမင်းကြွေးသောအလုပ်ကို တာဝန်သိသိ ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လုပ်ရပါလိမ့်မယ်
ဒီလိုဆိုရင်တော့ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ် အိပ်မတ်တွေအတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ကို
ကျုပ်ကတော့.. မြန်မာတွေ.. တိုင်းပြည်ပြောင်းချင်ရင်.. ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘ၀နဲ့.. ဘ၀တခုလုံးလွှမ်းမိုးထားတဲ့.. ဘာသာရေးအမြင်တွေကို.. ပြန်ဆန်းစစ်.. ဝေဖန်ပြီး.. ပြုပြင်သင့်ကြတယ်ထင်မိတယ်..
လူသားရဲ့.. ရှင်သန်နေတဲ့.. ဘ၀ကို လွှမ်းမိုးတာ.. ဘာသာရေးပါ..
ကိုယ်ပြောင်းမှ.. ကိုယ်လိုလူတွေစုနေတဲ့.. မိသားစု.. ရပ်ကွက်.. မြို့ရွာ.. ပြည်နယ်.. တိုင်းပြည်ပြောင်းပါမယ်..
ဆူဆိုက်ဘုမ်ဘာ၏… ကလေးများစာသင်နေသောကျောင်းတွင်.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်.. သတ်သေ၍.. ဗုံးခွဲသံ…။
မသေခင် ၀ါကျ အထားအသိုလေး မှတ်သွားပါဦးနော
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေ၍ ဗုံးခွဲသံ ဆိုတာ မမှန်ပါဘူး
၀ါကျလဲ မမှန် သတ်ပုံလဲ မမှန်ပါဘူး
သတ်သေပြီးမှ ဗုံးခွဲလို့ မရပါဘူး.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဗုံးခွဲ၍ သတ်သေသံ လို့ရေးသင့်ပါတယ်နော်..
ယူနီဗာစတီအော့ဖ် အပေါ်စဖို့ ဒ်
စိန်ဗိုက်ဗိုက် မင်းက ဗာစီတီရဲ့အပြင်မှာနေတာလား
ဟုတ်ပ အပြန်အလှန်လေးစားမူ့ ………………….
အောက်စဖို့ ဒ် မှာ ရေကြီးလို့အပေါ်စဖို့ ဒ် ပြောင်းသွားတာပါ
ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာ … အပြောလွယ်သလောက် အလုပ်ခက်ပါတယ် အစ်မ မနောရယ် ။
ပါးစပ်က ပြောင်းလဲ ရုံနဲ့ မရပါဘူး .. တကယ်လည်း လည်းပြောင်းလဲတဲ့ ပြယုဂ်ဖြစ်ဦးမှပါ … ။
ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာလည်း …. ကောင်းသောပြောင်းလဲ ခြင်း ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလေးလည်း …. သတိထားရပါဦးမယ် … မဟုတ်လျှင် ထိုင်နေတာ အကောင်းသား .. ထမှ ကျိုးမှန်း သိဆိုသလိုလေးတွေလည်း ဖြစ်တတ်တာကြောင့်ပါ ။
ပြောင်းလဲ တယ်ဆိုရုံနဲ့ ပြီးရောလားဆိုတော့လည်း ……. မဟုတ်သေးဘူးပဲ …..
ပြောင်းလဲခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ .. ရိုက်ခတ်မှု ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရယ်ရှိရပါဦးမယ်….
ဒီလိုမှ မဟုတ်လျှင် … ပြောင်းလဲ ခြင်းက .. အာပလာ ပြောင်းလဲခြင်း တစ်ခုလိုပဲ အဓိပ္ပါယ်မရှိဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် …… ဟီး
ဟုတ်ပဗျာ။ တော်တော် တော့ စဉ်းစားရ ကြပ်တယ်နော။
အကုန်ကောင်းပြီး နောက်ဆုံးကျမှ ဟီး :mrgreen:တဲ့
ဟုတ်ပ လေးလေးရယ် သေသေချာချာ ဖတ်နေတုန်းရှိသေးတယ် ပုံတောင် ပါလိုက်သေးတယ်…
လေးလေးရယ် သမီးဒီရက်ပိုင်း အချိုးနည်းနည်းပြင်နေလို့ပါ .. အဟီး အားလျှင် ဒေါသထွက်တဲ့စိတ်တွေကို ပြောင်ချော်ချော်စိတ်ဘက်ရောက်အောင် သွပ်သွင်းနေချိန်မို့ … သစ်ရွက်လှုပ်တိုင်း ရယ်မိပါတယ် ခွိခွိ
တခါတလေ ရုပ်တည်နဲ့ အတည်ပေါက်နောက်လိုက်တာတွေ တဖက်သားအပေါ် ခံရခက်စေတဲ့ ဖီလင်မျိုးသက်ရောက်သွားမှာလည်း ကြောက်တယ် …. ဒါကြောင့်ပါ … အစ်မ မနောဆိုလျှင် .. ခဏခဏ … အနောက်ခံရလည်း .. သူကတော့ မဖြုံတော့ပါဘူး … ဟီးဟီး ။
ဟဟ… နောက်တိုင်းသာ စိတ်ဆိုးပြီး လိုက်ခံစားနေရရင်တော့ မနောလည်း မလွယ်ဘူးသိလား ညီမလေး ဒါကြောင့် မဖြုံတော့တာဖြစ်မယ်။
ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းကို မျှော်လင့်တတ်ကြတာ သဘာဝလို့ဆိုရမလားဘဲ၊ ခင်ခကတော့ ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကို အရင်ပြောင်းနေရတယ်ဗျာ။